तपाईंको ब्रत – Islam Guide
Category: तपाईंको ब्रत
अल्लाहले मुस्लिमहरूमाथि वर्षमा एक महिनाको ब्रत अनिवार्य गर्नुभएको छ । त्यो रमजानको महिनामा हुन्छ र यो इस्लामको चौथो महत्वपूर्ण आधार हो । अल्लाहले भन्नुभएको छ– “हे आस्थावानहरू हो ! “तिमीहरूमाथि ब्रत अनिवार्य गरिएको छ, जसरी तिमीहरू भन्दा अघिका मानिसहरूमाथि अनिवार्य गरिएको थियो । यसबाट तिमीहरूमा तक्वा (ईश्-भय) उत्पन्न हुनेछ ।” (कुरआन : २/१८३)
ईदुल्-फित्र ईद र चाडपर्वहरु धर्मको प्रतीक हो। जुन बेला रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मदीना पुग्नु भयो, त्यहाँका बासिन्दाहरुलाई वर्षमा दुई पटक चाडपर्वमा रमाइलो गर्दै गरेको देख्नु भयो। उहाँले सोध्नु भयो… “यो के को खुशियाली हो ?” उनीहरुले जवाफ दिए : इस्लाम पूर्व बाजे पुर्खाको पालादेखि नै हामीहरु यस्तै गर्दै…
नफ्ली (ऐच्छिक) ब्रत
नफ्ली (ऐच्छिक) ब्रत अल्लाहले सालमा एक महिनाको ब्रत अनिवार्य गर्नु भएको छ, तर बढी पुण्यको लागि नफ्ली (ऐच्छिक) ब्रत बस्ने प्रेरणा दिनु भएको छ। केही नफ्ली ब्रतहरु यस प्रकार छन्… १) आशूराको ब्रत- इस्लामि पात्रो अनुसार वर्षको पहिलो महिना (मुहर्रम) को दशौं तारिखलाई ‘आशूरा’ भनिन्छ। ‘मूसा’ नामी नबीको युगमा फिर्औन…
रमजानमा ब्रत भङ्ग गर्ने व्यक्तिको लागि के हुकुम छ?
रमजानमा ब्रत भङ्ग गर्ने व्यक्तिको लागि के हुकुम छ? यदि कसैले बिना कुनै कारण रमजानको दिनमा ब्रत भङ्ग गरेको छ, उसले अल्लाहको अगाडि आफ्नो पाप र अवज्ञाको तौबा (प्रायश्चित) गर्नु पर्छ र त्यस दिनको कजा (पूरा) पनि। यदि कसैले सम्भोग गरेर ब्रत भङ्ग गरेको छ, उसले कजा (पूरा) गर्नुका साथै…
अल्लाहले कसको लागि ब्रत छुट गर्नु भएको छ?
अल्लाहले कसको लागि ब्रत छुट गर्नु भएको छ? अल्लाहले आफ्नो कृपा र करुणाले अशक्त व्यक्तिहरुका लागि ब्रत बस्न छुट गर्नु भएको छ। उनीहरु यस प्रकार छन्… १) बिरामी- ब्रतले गर्दा रोग झन बढ्ने वा निको ढिलो हुने सम्भावना छ भने यस्तो बिरामीले ब्रत बस्नु पर्दैन तर निको भैसकेपछि बस्न नपाएको…
ब्रत भङ्ग गर्ने कुराहरु
ब्रत भङ्ग गर्ने कुराहरु केही यस्ता कुराहरु छन्, जसले ब्रतलाई भङ्ग गरिदिन्छ, तसर्थ ती कुराहरुबाट जोगिनु अनिवार्य छ। यी निम्न लिखित छन्… १) खानपिन गर्नु, अल्लाहले भन्नु भएको छ… “सेतो रेखा कालो रेखाबाट प्रष्ट भएदेखि प्रत:काल (फज्रको अजान) सम्म खानपिन गर, फेरी राति (सूर्यास्त) सम्म ब्रत बस।” (श्रोत- सूरह अल्-बकरह…
चौथो अध्याय- तपाईको ब्रत
चौथो अध्याय- तपाईको ब्रत ब्रतको अर्थ- इस्लाममा ब्रतको अर्थ- अल्लाहको उपासनाको लागि प्रात: काल (फज्रको अजान) देखि सूर्यास्त (मग्रिबको अजान) सम्म खानपिन, सम्भोग तथा ब्रतलाई भङ्ग गर्ने समस्त क्रियाकलापहरुबाट टाढा बस्नुलाई ब्रत (रोजा) भनिन्छ। रमजान महिनाका विशेषताहरु इस्लामि पात्रो अनुसार नवौं महिनामा रमजानको ब्रत बस्नु पर्दछ। इस्लामि पात्रो अनुसार नवौं…